Shiinaha oo wada dadaal lagu soo furanayo Shaqaale looga afduubtay Sudan – SBC
Shiinaha oo wada dadaal lagu soo furanayo Shaqaale looga afduubtay Sudan
Posted by Webmaster on February 1, 2012 Comments
Wasiir ku xigeenka Arimaha Dibada ee Wadanka Shiinaha Mr Hangsheng ayaa waxaa uu ka dalabaday Dowlada Suudaan inay qeyb weyn ka qaadato sidii loo siideyn lahaa shaqaale garaya 29 qof oo shiines ah kuwaasi oo dhawaan qafaasheen maleeshiyaad reer suudan ah.
Dalabka Dowlada Shiinaha ee ah in la siidaayo Shaqaalaheeda lagu haysto gobolka Kordofan ayaa Imaanaya Xilli dhawaan uu afhayeenka Kooxda qafaalka geystay uu sheegay in dadka ay haystaan la geeyay Goob amaan ah islamarkaasina ay xaaladooda caafimaad aad u wanaagsan tahay.
dhinaca kale mid ka mid ah kooxda qafaalka loo haysto ayaa sheegay inay ka warheleen in Shiinaha uu suudaan keenay koox ka qeybqaadata howlgal lagu soo furanayo Muwadiniintiisa isaga oo xusay inaysan taasi baqdin ka qabin waxaana uu xusay in uu u sheegayo ehelkooda inay nabad qabaan.
Afduubka lagula kacay Shaqaalaha Dowlada Shiinaha ee Suudaan joogay ayaa waxaa uu xumeeyay xiriirka Labada dowladood gaar ahaana iibsiga Saliida oo Suudaan ay u iibgeyn jirtay Wadanka Shiinaha.
Gobolka Uu afduubka ka dhacay ee kordofan waxaa uu ku yaala xuduuda Koonfurta Suudaan oo dhawaan xoriyadiisa ka qaatay Sudaan inteeda kale waxaana xiisada halkasi ka jirta ay salka ku haysa Gooni isku taiga Koonfurta Suudaan.
Afduubka Shaqaalaha Shiinaha ee Gobolka Kordofan ayaa waxaa uu sidoo kale sababay in Gobolo kale oo suudan ku yaala ay ka soo guuraan shaqaalaha Dowlada Shiinaha kuwaasi oo cabsi ka qaba in la qafaashay, dhamaan shaqaalaha shiinaha ee Jooga Suudaan ayaa ku soo uruuray Magaalada Khartoum.
Jihaan Maxamed Cabdi
SBC International Monitoring